Chelsea oo Manchester United kula dagaallameysa saxiix laacib ka tirsan qaranka Faransiiska – Gool FM
Chelsea oo Manchester United kula dagaallameysa saxiix laacib ka tirsan qaranka Faransiiska
Haaruun January 10, 2021
(London) 10 Jan 2021. Waxaa furan suuqa kala iibsiga ee bisha Jannaayo, iyadoo kooxaha qaaradda Yurub ay isu diyaarinayaan sameynta saxiixyo cusub si ay ugu dagaallamaan qaybta dambe ee fasal ciyaareedkan.
Chelsea oo ka mid ah kooxaha doonaya inay sameeyaan saxiixyo cusub ayaa hadda kusoo biirtay loollanka loogu jiro difaaca kooxda RB Leipzig ee Dayot Upamecano.
Xiddigan Faransiiska ah ayaa bartilmaameed u ahaa Manchester United muddooyinkii dambe, waxaana hadda raacdadiisa kusoo biiray Blues.
Inkastoo Thiago Silva iyo Kurt Zouma ay yihiin dookha koowaad ee Frank Lampard u adeegsado difaaca dhexe, haddana waxa uusan la dhacsaneyn xiddigaha keydka sida Antonio Rudiger, Fikayo Tomori iyo Andreas Christansen.
Si kastaba ha ahaatee, Chelsea ayaa diyaar u ah inay Man United kula loollanto saxiixa 22-jirka difaaca dhexe kaga ciyaara kooxda reer Germany ee Leipzig.
Macallinka cusub ee PSG, Mauricio Pochettino oo markaan doonaya xiddig sare oo ka tirsan Kooxda Man United
Taageerayaasha Real Madrid oo ka walaacsan Karim Benzema... (Xaalad noocee ah ayuu ku jiraa xiddigan?)